Isipiliyoni sakho sokuqala se-Weave? Izinto Ezi-5 Okufanele Uzazi Kwab – SL Raw Virgin Hair LLC.
Isipiliyoni sakho sokuqala se-Weave? Izinto Ezi-5 Okufanele Uzazi Kwabagqoki Be-Weave Okokuqala
Lapho wenza i-weave yenziwe, kunezinto ezithile ezidingekayo ukuze uthole okuhlangenwe nakho okukhumbulekayo. Nazi izinto zethu eziphezulu ezi-5 okufanele uzazi kubasebenzisi be-weave bokuqala.
Ukuthola i-weave okokuqala ngqa kungaba yinto ethokozisayo – ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Kodwa, uma ufuna ukwenza i-weave yakho yokuqala ibe yinto enhle ongayikhumbula, kunezisekelo ezimbalwa okufanele uzazi.
Ngakho-ke, ake sibheke izinto ezingu-5 okufanele uzenze njengomuntu oqala ukuluka.
1. Khetha izinwele zakho ngokuhlakanipha
Izinwele ezinhle ziqala ngezinwele ezinhle.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuthi i-weave yakho ihlale futhi ibukeke kahle, udinga ukutshala imali ekulukeni okuhle kwekhwalithi. Futhi lokho kuqala ngokunwetshwa kwezinwele zomuntu zekhwalithi ephezulu.
Njengestayela sangaphambilini sabaphambili be-Hollywood, ngiyazi ukuthi ungakanani umehluko olwenziwa uhlobo lwesandiso sezinwele osikhethayo kusitayela.
Ngakho, into yokuqala ngaphandle komnyango ukuthola izandiso zezinwele zabantu zekhwalithi ephezulu.
2 Nikeza izandiso zezinwele zakho ukunakekelwa kwekhwalithi
Uma utshala izinwele zomuntu, udinga ukuziphathisa okwezinwele zakho. Okusho ukuthi, idinga uthando nokunakekelwa okuthile.
Ukunakekelwa kwe-weave kudinga i-shampoo ne-conditioning enemikhiqizo emihle, ikakhulukazi uma utshale imali ezinweleni zabantu. Kufanele ngeshampo yokufaka kwakho ngeshampo okungenani kanye njalo emavikini angu-2 futhi uhlale ngaphansi kwesomisi esinama-hood amahora angu-1.5 ukuze uqinisekise ukuthi yoma kahle.
Uma kungenzeki, lokhu kungaholela ekubambezelekeni kuleyo weave enhle otshale kuyo noma okubi kakhulu isikhutha sezinwele.
Ngakho-ke, uma ungakabi nawo okomisa okomisa, ngincoma ukuthi udlulele e-Sally’s Beauty lapho ungathola khona okomisa amahood ngemali engaphansi kuka-$80.
3. Isonge ebusuku
Elinye iphutha okufanele uligweme njengomuntu oqalayo ukufaka i-weave ukungazisusi kahle izinwele ebusuku - noma noma nini lapho ulala ngenxa yalolo daba.
Ukugcina izinwele zakho ziboshwe ngokuphephile njengoba ulele kusiza ekweluleni impilo yekhanda lakho lezinwele, kuvinjwe ama-tangles, futhi kunciphise ukuphuka. Izogcina izinwele zakho zisendaweni ukuze inqubo yakho yezinwele zasekuseni ibe lula kakhulu.
Ngakho, qiniseka ukuthi ubopha izinwele zakho ebusuku usebenzisa ibhonethi ye-satin noma isikhafu sikasilika
Ukuze uthole inqubo enemininingwane, bheka okuthunyelwe kwethu kwe-hack yobuhle kokuthi ukugcina isandiso sakho sezinwele ebusuku.
4.Gwema ukungezwani lapho ufaka futhi ugqoka i-weave yakho
Cha, awudingi ama-weave afakwe aqine ukuze abe buhlungu Uma ufuna ukuvikela izinwele zakho zemvelo ngenkathi ugqoke ama-weave, lokhu kuyisihluthulelo sokugcina izinwele futhi uvimbele ukuphuka.
Ukungezwani komzimba kungabangela izinwele zakho zemvelo ukuthi ziphuke noma ziphume ngisho ezimpandeni okuholela ekulimaleni okungapheli kwefollicle yezinwele.
Lokhu kubalulekile futhi uma unakekela i-weave yakho. Zama ukugwema ukungezwani ngesikhathi senqubo ye-shampoo.
5. Yehlise uma isiqedile isikhathi sayo
Yebo, isitayela sisabukeka SILUNGILE. Kodwa kuthiwani ngempilo yezinwele zakho?
Elinye lamaphutha elenziwa abafake i-weave okokuqala wukugcina i-weave isikhathi eside.
Ukuze uqinisekise ukuthi unakekela izinwele zakho nekhanda lakho, kunconywa ukuthi ungalokothi ushiye i-weave isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-3. Ngokufanelekile, amaviki angu-6-8 angcono kodwa angabi ngaphezu kwezinyanga ezi-3.
Ukushiya i-weave yakho isikhathi eside kungabangela ukuhlangana, ukuphuka okukhulu kanye nezinkinga ezinzima zesikhumba sekhanda.
Futhi kunjalo. Amaphuzu angu-5 abalulekile okufanele uwakhumbule kwabaqalayo ukufaka ama-weave.
Manje, uma ungathanda usizo lokuthola izandiso zezinwele zomuntu zekhwalithi ephezulu ze-weave yakho, qhubekela phambili ukuze ubuke iqoqo lethu lezandiso zezinwele zomuntu ezinamagagasi, ezi-kinky, ezisontekile, nezimahhadla. >. Uzothola ama-wefts athungayo afaneleka kakhulu ekwenziweni kwethu okuhlukile kweqoqo lenqwaba yezinwele.